Stellaris Overlord Kuwedzera: Sunungura Yakamira - Game Point - Bhodhi uye Vhidhiyo Mitambo
Yakatumirwa ne Andre Volkman | Apr 21, 2022 | nhau, Vhidhiyo mitambo
Iyo itsva Stellaris yekuwedzera Overlord ichaburitswa muna Chivabvu 12, 2022: Paradox Interactive inopemberera zuva rekuzvarwa kwaStellaris nekuwedzera kutsva uye yemahara update.
Paradox Interactive nhasi inozivisa kuburitswa kwekuwedzera kuzere kunotevera kweStellaris muna Chivabvu 12 pane ese maPC mavhezheni. Overlord ichapa vatambi mukana kune zvitsva zvimiro zvakanangana neakaomesesa manejimendi eiyo intergalactic empires. Kubva kumaminion akasarudzika kusvika kune ane simba megastructures, Overlord inopa vatambi nzira dzakawanda dzinonakidza dzekutungamira humambo hwavo hwegalactic. Overlord ichave iripo pamutengo unokurudzirwa wekutengesa we €19,99.
Stellaris: Yemahara Update 3.4 "Cepheus"
Iyo yemahara yekuvandudza 3.4 "Cepheus" yeStellaris ichaburitswa panguva imwe chete nekuwedzera kweOverlord. Iyi yekuvandudza inosanganisira zvitsva zvemukati uye kugadzirisa kune vese vatambi vakagadzirwa neStellaris Custodian Team. Vese vari kuburitswa munguva yekupemberera pamwe nenharaunda yegore rechitanhatu reStellaris, rakaburitswa muna Chivabvu 2016.
Zvimiro zvekuwedzera kweOverlord:
Vatongi vanogadzira mitemo: Iine makanika matsva evasals, mabasa ezvimwe zvidzidzo anogona kutsanangurwa - vatambi vanogona kugadzira humambo hutsva hutsva kuti vakure kuva masimba ehupfumi, nyanzvi dzemauto uye vagadziri vetekinoroji. Vanotaurirana kana kukumbira zvibvumirano nezvibvumirano pakati pevashandi vavo kuti vaone remangwana renyika dzakawanda, uye vagowana zvikomborero!
Nyeredzi inopenya zvikuru inofanira kuvatungamirira: Vatambi vanogona kutsvaga nekubatanidza maempire akaparara! Mumagalaxi akakura vanosangana nemamwe akasarudzika enclaves, kubva zvisinganzwisisike maShroudwalkers kuenda kune echiuto mercenaries uye nehuchenjeri hwekununura vashandi. Vanogona kushandiswa kugadzira hukama hunobatsirana kuitira kuti vawane masevhisi avo akasiyana, kana kuti vanogona kumanikidzwa pasi pekutonga kwemunhu.
Mavambo Matsva mashanu:
Imperial fiefdom - Kutanga semutongi ane hunyanzvi, rimwe zuva unogona kutonga boka rose renyeredzi.
Nechipfuramabwe kune nyeredzi - Izvo zvakaora zvakasara zve quantum catapult zvakawanikwa padyo - ndezvipi zvakavanzika zvinogona kuburitswa kana iwe wakangwara zvakakwana kuti uzvishandise zvakare?
pasi pevhu - Mhuka yakagadziridzwa kuhupenyu hwepasi pevhu, inobudirira mumigodhi uye archeology. Iye zvino yave nguva yekuona zvakavamirira kure, kure kumusoro kwepamusoro!
Murayiridzi weShroud - Kuburikidza nekusangana nevanoda kuziva psykers vanozivikanwa seShroudwalkers, humambo hwako hwakadzidza zvakawanda nezvekuwedzera pfungwa!
Progenitor Hive - Neutungamiri hwakakodzera, Humambo hweHivemind hunogona kubudirira kupfuura nakare kose ... asi pasina hutungamiriri hwakakodzera, Mukoko uchaputsika.
Kuronga ramangwana uye zviratidzo zvesimba:
Zvitsva zvetekinoroji zvinopa Humambo mupendero wainoda kuti uve simba rinotonga mhiri kwegwara renyeredzi.
Orbital Mhete dzinowedzera pesvedzero (pamwe nekudzivirira kugona) uye kuwedzera kuratidzira kwesimba kubva kupasi rako kuenda mudenga.
Hyper-Relays inobvumira zvikepe zvako kuti zvifambe nekukurumidza kupfuura nakare kose.
Quantum catapults inopa vatambi nzira nyowani dzekuita nekukurumidza mumapoka enyeredzi panguva imwe chete vachiratidzira Simba, kunyangwe iri rwendo rwune njodzi kune zvikepe pasina nzira yekudzokera.
Kune zvakare makwara mana matsva ekukurudzira iwe kusimuka kune hukuru.
Stellaris - Nova Edition [PC Code - Steam] * 49,99 EUR tenga
Kare DLC Itsva yeTiny Tina's Wonderlands iri pano
Inotevera Areka Yakarasika: Huru yekuvandudza inounza kirasi nyowani
Asmodee inozivisa kuwedzera kutsva kweDixit: Dixit 7 Zvakazarurwa
Matoyi matsva: Toy Mubairo wezvigadzirwa zvishanu zvitsva